ဆွေဝင်း (Myanmar Now) – ရွေးကောက်ပွဲရှုံးသော်လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဆက်လက်အရေးပါနေဦးမည် | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၅
ရန်ကုန် (Myanmar Now) – ကရင်ပြည်နယ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွင် ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံး ကျည်ဆံထိသည့် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သူ စစ်အရာရှိဟောင်း ဦးညွန့်ဖေသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ဌာနမှူးတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က သက်ပြည့်ပင်စင်ယူပြီး မိသားစုနှင့်အချိန်ကုန်ရန် အားခဲခဲ့သူဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ ဦးဆောင်သော ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက သူ့ကို ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အတွက် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာပြီး ၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဦးညွန့်ဖေက သူ၏မဲဆန္ဒနယ် သာကေတ မြို့နယ်အတွင်း တံတား ဆောက်၊ လမ်းဖောက်၊ ရေတွင်းတူး စသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ဦးညွန့်ဖေတစ် ယောက် လက်ရှိနေရာအတွက် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြန်လည်အရွေးခံရာ သူ၏ပါတီခေါင်းဆောင်များကဲ့သို့ပင် အရှုံးနှင့်သာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ၄၁ နေရာသာ ရရှိပြီး အဓိကပြိုင်ဘက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) က နေရာပေါင်း ၃၉ဝ ရရှိသွားသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုး နေရာအနည်းစုသာ အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း အခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်အရပ်ရပ်တွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း နေရာရထားသည့် စစ်တပ်၏ ထောက်ခံမှု ရရှိထားခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွင် စစ်အရာရှိနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမာခံ အများ အပြား ပါရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အားကောင်းသော အင်အားစုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မည့် အနေအထား တွင်ရှိသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် ဦးညွန့်တင်က ပါတီသည် အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ရှိနေမည်ဟု ပြောသည်။
“တို့ပါတီက တပ်မတော်နဲ့က မဟာမိတ်ပဲ။ သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီး လွှတ်တော်မှာ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းတာ ဆက်လုပ်နိုင်မှာ ပဲ။ ပါတီကြီးတစ်ခု အပြတ်အသတ်နိုင်သွားလို့ လုပ်ချင်တာလုပ်ဆိုပြီး လွှတ်ပေးထားလို့ ဘယ်ရမလဲ” ဟု ၇၃ နှစ်အရွယ် သံအမတ်ကြီးဟောင်း ဦးညွန့်တင်က ပြောသည်။
“တို့က ကဖျက်ယဖျက် လုပ်မှာလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး၊ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းပြီးကြိုးစားသွားဖို့ပဲ”
ပြည်ခိုင်ဖြိုးသည် လွှတ်တော်အတွင်း ဆက်ရှိနေသည်သာမက၊ အခြားသောပါတီများနှင့်ယှဉ်လျှင် လူအင်အား၊ ငွေအင်အား အလွန် တောင့်တင်းသည့်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် အခိုင်အမာ ဆက်လက်ရပ်တည်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တွင် နိုင်ငံရေးသင်တန်းများပို့ချနေသော Educational Initiatives အဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Igor Blazevic က ဆိုသည်။
NLD ဦးဆောင်မည့်အစိုးရ အပေါ် ထားရှိသည့် လူထု၏ မျှော်လင့်ချက်များကို အစိုးရသစ်က ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အခြေအနေနှင့် ကြုံရပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရသက်တမ်းကာလက ပိုကောင်းသယောင်ယောင်ရှိခဲ့သည်ဟုထင်ကာ လူတချို့ကစိတ်ပြောင်းလာလျှင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အမြတ်ထွက်နိုင်သည်ဟုလည်း သူကဆိုသည်။
“အင်အားချိနဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဘက်ကို ကူးပြောင်းရာမှာ ယခင်အာဏာရပါတီတွေဟာ ဆက်လက် အသက်ရှင်နိုင်တယ်၊ နိုင်ငံရေးမှာ အရေးပါတဲ့အခြေအနေကို ဆက်လက် ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်” ဟု Igor Blazevic က ဆိုသည်။
အရေးပါနေဆဲ ယခင် အာဏာရပါတီများထဲတွင် အင်ဒိုနီးရှားရှိ ဂိုလ်ကာပါတီ၊ ဆလိုဗေးနီးယားနှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတို့ရှိ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်ပါတီများ ပါဝင်သည်ဟု သူက ပြောသည်။
● အရှုံးကို သုံးသပ်ခြင်း
သံအမတ်ကြီးဟောင်း ဦးညွန့်တင်က ပြည်ခိုင်ဖြိုး အကြီးအကျယ် ရှုံးသွားခြင်းမှာ ပါတီတွင်တစ်စုံတစ်ရာချို့ယွင်းချက်ရှိ၍မဟုတ်ဘဲ ပြည်သူလူထုက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အုပ်ချုပ်ပြီးနောက်၊ NLD ကို စမ်းသပ်အုပ်ချုပ်စေချင်သည့် သဘောဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သည်။
သံအမတ်ဟောင်းဦးညွန့်တင်သည် ၂ဝ၁၅ တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ထပ်မံ ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုတော့ပေ။ ပါတီတွင် အကြံပေး အဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
စစ်အရာရှိဟောင်း ဦးညွန့်ဖေကို ရွေးကောက်ပွဲရှုံးရခြင်း၊ ပါတီ၏ အားနည်းချက်၊ မူဝါဒ ပြင်ဆင်မှု အကြောင်း မေးသောအခါ “ဘာမှ အားမနည်းဘူး၊ ဘာမှပြင်စရာကို မလိုဘူး၊ တို့မဆိုးဘူး ဆိုတာထက် လူထုက ပိုကောင်းတာကို လိုချင်လို့ပေါ့ကွာ” ဟု ဆိုသည်။
သူက လွှတ်တော်သက်တမ်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားရင်း စိတ်လွတ်လက်လွတ် ပုံစံဖြင့် ကုလားထိုင်တွင်ခါး ကို လျှော့ထိုင်လျက် “ငါးနှစ်လုံးလုံး လူမိုက်လုပ်ခဲ့ရတယ်” ဟု ပြောသည်။ ၆၅ နှစ်အရွယ် ဦးညွန့်ဖေက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတိုက်အခံအမတ်အချို့၏ အဆိုတင်သွင်းမှု အများအပြားကို ကန့်ကွက်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
“ရန်ကုန်တိုင်းတစ်တိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ မူလတန်းကလေးများအားလုံး အဟာရတိုက်ကျွေးရေးအဆို တင်လာတယ်၊ တင်တဲ့သူ ကတော့ ဟီးရိုးပေါ့။ ဖြစ်မှ မဖြစ်နိုင်တာ။ တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ပဲ တစ်နေ့ကို သိန်း ၂,ဝဝဝ လောက် ကုန်မယ်။ ဒီတော့ ပယ်ချတာပေါ့” ဟု စာအုပ်အကြီးအသေး၊ ဖိုင်တွဲအကြီးအသေး၊ သတင်းစာဂျာနယ် စသည်များကို စစ်တန်းလျားတစ်ခုမှာကဲ့သို့ သေချာသပ်ရပ်စွာစီထားသော စားပွဲနောက်မှ ဦးညွန့်ဖေ ပြောသည်။
“(ရွှေတိဂုံဘုရားအနီး) ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန်း ဆိုတာလည်း တို့တိုင်းအဆင့်က ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကဆုံး ဖြတ်တဲ့ဟာဆိုတော့ ပယ်ချရတာပေါ့”
သူ၏ နောက်ဘက်နံရံတွင်တွင်တော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဓာတ်ပုံ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ခြသေ့င်္ပုံ ပါတီတံဆိပ်ယှဉ်တွဲထားသော အစိမ်းရောင်ရင့်ရင့်ပိုစတာကို ချိတ်ထားသည်။
● ပါတီတွင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး
ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဦးဆောင်၍ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကို လူမှုရေးအသင်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲနီးချိန်တွင် အသင်းကို ထိုအမည်ဖြင့်ပင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ မဲမသမာမှုများ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထိုရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး အပြတ်အသတ်ရှုံးနိမ့်သွားရခြင်းမှာ လူထုက ပါတီကို မုန်းသည် ဆိုခြင်းထက် အုပ်ချုပ်သူ အပြောင်းအလဲကို လိုလားခြင်းကြောင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီပင် ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်း အကွဲအပြဲများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟုလည်းကောင်း ပါတီတွင်းပြောဆိုသုံးသပ်မှုများရှိနေသည်။
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက်ပြင်ဆင်ရန် ပါတီတွင် အပြောင်းအလဲလုပ်မည်ဟု ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့က ထုတ်ဖော် ပြော ကြားထားပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တစ်လအကြာတွင် အမာခံများဖြင့် ပါတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ် သည်။
“ပါတီကတော့ လွှတ်တော်အတွင်းမှာရော၊ အပြင်မှာရော ဆက်လက်လှုပ်ရှားနေဦးမှာပဲ” ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုး၏ ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီး အတွင်းရေးမှုးဖြစ်သူ ဦးသာဝင်းက ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီး တစ်လအကြာ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ပါတီအမာခံများ၏ စာရင်းကိုပြန်လည်ပြုစုနေပြီး ထိုအချက်အလက်များဖြင့် ပါတီကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ သို့သော်လည်း မည်သည့်အချိန်တွင်
မည်သို့မည်ပုံ ပြုလုပ်မည် ဟူသော အသေးစိတ် အချက်အလက်များ မထွက်ပေါ်လာသေးပေ။
လက်ရှိ စိစစ်နေသော ပါတီအမာခံများမှာ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့သူများဖြစ်ကြောင်း ဦးသာဝင်းက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးမောင်မောင်သန်းကလည်း ပါတီတွင် ရာထူးတာဝန်များ ယူထားပြီး တာဝန် အမှန်တကယ် မထမ်းဆောင်သူများ ရှိကြောင်း၊ ထိုသူတို့ နေရာတွင် အစားထိုးရန် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကာလတွင် အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ စာရင်းကို ပါတီဌာနချုပ်သို့ပေးပို့မည်ဟု ရှင်းပြသည်။
“ပါတီအတွက် အချိန်ပြည့်လုပ်နိုင်တဲ့သူဆိုရင်လည်း အချိန်ပြည့်ပေါ့၊ အချိန်ပိုင်းလုပ်နိုင်သူလည်း အချိန်ပိုင်းပေါ့၊ အမှန်တ ကယ် ပြည်သူ့အတွက်လုပ်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ လိုအပ်နေတယ်။ အခု ပါတီကေဒါစာရင်းကို ရပ်ကွက်လိုက် ကောက်နေပါ တယ်” ဟု ဦးမောင်မောင်သန်းက ဆိုသည်။
ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် အာဏာပိုင်တို့နှင့် မကင်းရာမကင်းကြောင်း စီးပွားရေးသမား တချို့ကို အမိန့်ညွှန်ကြား ချက်ဖြင့် တာဝန်ပေးစေခိုင်းသော်လည်း ဖိဖိစီးစီး လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပါတီတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူအချို့မှာ အတိုက်အခံ NLD ထောက်ခံနေသူများဖြစ်နေသည်ဟု သူကဆိုသည်။
“တချို့တွေက ဖရဲသီးဗျ၊ အပြင်မှာစိမ်းပြီး အတွင်းမှာ နီနေတာ။ ဒါတွေလည်း ကြုံခဲ့ရတာပဲ” ဟု ဦးမောင်မောင်သန်းက ပြောသည်။
ပါတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာတွင် မြို့နယ်၊ ခရိုင် အဆင့်ထိသာ ပြုလုပ်မည်လော၊ ဗဟိုအဆင့်ကိုပါ ပြောင်းလဲမည်လော ဆိုသည် ကို မသိရသေးပေ။ ပါတီ တရားဝင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော ဦးသိန်းစိန် သမ္မတသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်အခါ ပါတီတွင်ပြန်လည် ဦးဆောင်မည်လော ဆိုသည်မှာလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရှိရသေးပေ။
ပါတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ပါတီခေါင်းဆောင်များကြား ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် အသေးစိတ်ကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သြဂုတ်လ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အပြောင်းအလဲတွင် ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်ဖြစ် လာသော ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီးဟောင်း ဦးပိုက်ထွေးက Myanmar Now ကို ပြောကြားသည်။
● ရှုံးနိမ့်ခြင်းကပေးတဲ့ လွတ်လပ်မှု
ရွေးကောက်ပွဲတွင် အခြေအနေမကောင်းသော်လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးလွှတ်တော်အမတ်တချို့မှာ ထိုရှုံးနိမ့်မှုကြောင့်ပင် လွတ် လပ်သောပုဂ္ဂလက ဘဝ ပိုင်ဆိုင်ရန်အိမ်မက်မက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
စစ်အရာရှိဟောင်း ဦးညွန့်ဖေက ဇန်နဝါရီလ ၎င်းတို့၏လွှတ်တော်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသောအခါ နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့ရှိ သူပိုင်ဆိုင်ရာ တောအိမ်လေးတွင် မိသားစုနှင့် သွားရောက်အနားယူမည်ဟု ဆိုသည်။
“တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ပေါ့ပါးသွားပြီပေါ့ကွာ။ တော်လောက်ပြီလေ” ဟု ရယ်မောရင်း သူက ပြောဆိုလေသည်။ ။
photo source : encs.cn
4 Responses to ဆွေဝင်း (Myanmar Now) – ရွေးကောက်ပွဲရှုံးသော်လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဆက်လက်အရေးပါနေဦးမည်
ဇာနီကြီး on December 24, 2015 at 6:01 am
ဦးညွန့်ဖေ အကြောင်းကတော့ ဘူးလက်လှဆွေ ကိုသတိရပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂိုကာပါတီ https://en.wikipedia.org/wiki/Golkar ကိုကြည့်ရင် ၁၉၉၈ သူတို့ခေါင်းဆောင် အာဏာရှင် ဆူဟာတိုကျဆုံးသွားပြီး ပါတီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အပြင်းအထန် လုပ်ပါတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို ကြည့်ရင် လူထုမဲ ၃၀% လောက်တော့ ရပါတယ်။ ဒါကိုသိလို့ လွှတ်တော်မှာ ပီအာစနစ် (မဲရာနှုန်းအလိုက်အမတ်နေရာရရှိရေး) ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ လူထု ၃၀% ထောက်ခံပေမဲ့ အမတ်နေရာ ၅% ထောင်မရပါ။ ဒါပေမဲ့ အင်အားကြီးဆုံး အတိုက်ခံပါတီအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင် အင်အယ်ဒီ အမတ်၄၀ကျော်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ထိရောက်စွာ အတိုက်ခံမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခု ပြည်ခိုင်ဖြိုး အမတ်၄၀လောက်က စစ်တပ်၂၅% နဲ့ပေါင်းပြီး အတိုက်ခံများစွာလုပ်နိုင်ပါမယ်။ အခြေအနေကောင်းရင် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြေချော်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်) နောက်၅နှစ်ကြာချိန် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဦးညွန့်ဖေ ပြောသလို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဘာမှပြုပြင်စရာမလိုပါဘူး၊ ပြည်သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲပေးတာပါ ..လို့ခပ်တည်တည်နေမှာတော့ မဟုတ်ပါ။ ခေါင်းဆောင်ပိုင် အပြောင်းလဲ မကြာမီဖြစ်လာတော့မှာပါ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်ခေါင်းဆောင်များ ဥပမာ ဦးရွှေမန်း ဆိုတာလဲ ယခုအထိ အရေးပါ အရာရောက်နေဆဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရမှာလဲ ရာထူးကြီးတစ်ခုနဲ့ ပါဝင်မယ်လို့ အင်အယ်ဒီဦးဝင်းထိန် ပြောထားပါတယ်။ ဦးရွှေမန်း အုပ်စုလဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှာ ရှိနေပါတယ်။
Catwoman on December 24, 2015 at 8:55 am
No other country has 25 percent seats from the army. They should be shamed of themselves.
Cin Kam Suum on December 24, 2015 at 9:42 am
Catwoman on December 27, 2015 at 9:23 am